Ndithumele nje i-1000 yeedola kuNowa! | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 25, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Uxolo ngokubaleka kade koku! Sithumele uluhlu lwangeniso ku Ade Ngongeno ngalunye olunenombolo engaqhelekanga enxulumene (usebenzisa umsebenzi weRAND kwi-Excel emva koko uhlela ikholamu). Saye safumana Hannes Khetha inani elingahleliwe ngaphakathi kwamangeniso ayi-108 ukuze uHanes angazi ukuba ngubani oza kuphumelela. Ophumelele isipho sewaka leedola yayinguNowa wpstar.com!
Ukuhlawula iindleko zentengiselwano ye-Paypal, ndithumele i-1,040 yeedola kuNowa! Ndiyakuvuyela uNowa! Onke amabhaso aya kuba sendleleni nawo!
tags: ngokuzenzekelayoUmculo microdataAbantu microdataImveliso yemicrodataImveliso yemicrodata enezinto ezininzibalandeli be twitterumfanekiso we-youtube
Nov 25, 2007 ngo-5:56 PM
Wothukile. Bekuqhutywa kakuhle nangona kunjalo. Enkosi ngokusingatha isipho, Doug!
Nov 25, 2007 ngo-6:00 PM
Ewe lo undothusa kakhulu kuba bendihleli ekhaya ndigula imini yonke! Ndingathi le yinkuthazo yokufunda ibhlog yakho rhoqo, kodwa sele ndiyifunda yonke iposi. Enkosi ngokubamba ukhuphiswano olukhulu kwaye ndiyathemba ukuba wena kunye nabaxhasi bakho nonwabile.
Olu hlobo lwento lundinceda ngokwenene ukuba ndithethelele ixesha lam lokufunda ibhlog kumfazi wam 🙂
Nov 25, 2007 ngo-7:31 PM
Sivuyisana nawe uNowa! Ndikuthumelele amakhonkco amabhaso angaphezulu.
Yayilukhuphiswano olumnandi – ndijonge phambili kukhuphiswano lwakho olulandelayo Doug 😉
Nov 30, 2007 ngo-4:59 AM
Unethamsanqa, mfo onethamsanqa! *Kufuneka* uqhube ukhuphiswano kwibhlog yakho, uNowa, kwaye uphise ne-iPod. 😉
Baza kubhengezwa nini abanye abaphumeleleyo?
Nov 30, 2007 ngo-9:32 AM
Yonke yaya kumntu ophumelele ibhaso elikhulu! Ukhuphiswano olulandelayo ngokuqinisekileyo ndizakuba nebhaso lokuqala, elesibini, elesithathu… Andiqondi ukuba olu khuphiswano lutsale umdla omkhulu ngokuba nophumeleleyo omnye kuphela. (Kodwa kwamvuyisa uNowa!)
Nov 30, 2007 ngo-9:42 AM
Ooh kulungile! Andizange ndiqonde ngoko.
Ndiyathemba ukuba kukhuphiswano lwakho olulandelayo, uyakwenza kube lula ebantwini ukuba bangenele. Ukuba nabaxhasi be-10 ukubhala ngabo akukhuthazi kakhulu. Ewe sonke sifuna amangeno ongezelelweyo, kodwa kwizinto ezinokusebenza ngakumbi kuwe, njengokukunika ubhontsi kwi-SU, ukubhalisa kwisondlo sakho, ukukuthanda kwiTechnorati, njl.
Uluvo lwam nangona. 🙂
Isithuba esihle. Wenza iingongoma ezintle abantu abaninzi abangaziqondi ngokupheleleyo.
“Uxolo ngokubaleka kade kule nto! Sithumele uluhlu lwamangeno kwi-Ade kunye nengeniso nganye enenombolo engahleliweyo (usebenzisa umsebenzi we-RAND kwi-Excel kwaye emva koko uhlele ikholamu). Siye safumana uHannes ukuba akhethe inombolo engacwangciswanga phakathi kwamangenelo ali-108 ukuze uHannes angazi ukuba ngubani ophumeleleyo. Ophumelele i-1,000 yeedola nguNowa kwi-wpstar.com!
Ndiyayithanda indlela oyichaze ngayo loo nto. Uncedo kakhulu. Enkosi.